PressReader - Northern Eyethu: 2018-01-23 - Aju­luke amanzi te amaphoy­isa emba into en­gekho
Aju­luke amanzi te amaphoy­isa emba into en­gekho
Northern Eyethu - 2018-01-23 - NEWS • IZINDABA - Muzi Zin­c­ume
USIHLALO weMbazwana Com­mu­nity Polic­ing Fo­rum okuy­inhlangano es­eben­zisana namaphiy­isa ekul­wisa­neni nobungebengu,uMnuz. Themba Xolani Zikhali usenxuse amalunga om­phakathi ukuthi ase­bezisane nabo uma benezinkinga abahlangabezane nazo ben­gaphoqi amaphoy­isa ukuthi enze okupham­bene nom­thetho.
UMnuz. Zikhali ukusho lokhu emva kwe­sigameko lapho amalunga om­phakathi ebhekane nez­iqu za­mehlo nabak­wasid­lodlo nge­sikhathi bezama
ukuwaphoqa ukuthi akavume kumbiwe imigodi emithathu ebeku­solwa ukuthi kukhona okugqitshwe kuy­ona.
Lesi sigameko sen­zeke ngoM­som­bu­luko en­daweni yaseZabeni kwaMh­labuyalin­gana.
‘NgoM­som­bu­luko owed­lule amalungu om­phakathi ab­hekane ngez­iqu za­mehlo namaphoy­isa be­waphoqa ukuthi akumbiwe izin­dawo ez­in­tathu ebeku­so­lakala ukuthi kukhona okugqisthwe kulezin­dawo.
‘Yize amaphoy­isa ebe­wut­shela umphakathi ukuthu ngeke nje avele ambe ku­len­zin­dawo ngaphan­dle kokuthola in­cwadi ewa­gun­yazayo kodwa um­n­phakathi uvele wavuka umb­he­jazane wathi akumbiwe ngenkani.
‘Kulezin­dawo bekubonakala ukuthi umh­la­bathi uvukuzek­ile kukhona ukukwe kwen­zeka kulezin­dawo,’ kubeka uMnuz Zikhali.
Uqhube wathi emva kokuba lolud­aba lufinyelele ezin­dle- beni za­khe ube es­e­qonda es­iteshini samaphoy­isa ukuy­ox­ox­isan nawo ngol­weSi­bili ntam­bama nokuy­i­lapho kuthathwe isin­qumo sokuthi ku­vukwe ngol­we­siThathu kuy­ombiwa ukuze kubonakale ukuthi ngabe kukhona yini okugqotshwe kulezin­dawo.
‘Ngol­we­sithathu ekuseni abe es­e­fika amaphoy­isa nom­phakathi wahlangana kwaqalwa ukumbiwa kodwa kwan­gath­o­lakala lutho nokuy­i­lapho ngiqale khona ukubuz­abuza kubantu ukuthi ngabe kwakumba bani kulezin­dawo.
‘Ngivele ngeth­uka ukuthola ukuthi lemigodi ibim­biwa uChitha oz­im­bela imithi ku­len­dawo, futhi no­muthi obe­wumba ngiyawazi ukuthi in­gx­abu yawo iyaye ijule kakhulu.
‘Ngakho siy­acela sin­ga­holi be-CPF ukuthi umphakathi ux­humane nathi uma kukhona oku­so­layo un­ga­lokothi up­hoqe amaphoy­isa ukuthi enze okun­galungile,ngoba lokho kung­amosha ubudlel­wano obuhle esinakho namaphoy­isa,’ kubeka uMnuz Zikhali.
Okhu­lumela amaphoy­isa aseMkhanyakude, uKap’teni Jab­u­lani Mdlet­she, ube es­eluleka umphakathi ukuthi kumele wazi ukuthi amaphoy­isa kumele athole igunya ku­mat­shi uma kukhona ok­u­fanele kumbiwe okungcwat­shiwe.
‘Ngakho kumele babike emaphoyiseni uma kukhona oku­solisayo bese belinda ukuthi amaphoy­isa enze um­sebenzi wawo ngendlela,’ kubeka uKpt.Mdlet­she.
Muti man’s root dig­gings cause com­mu­nity flurry
Amalunga om­phakathi kanye namaphoy­isa ambe aze akhathala kun­gath­o­lakali lutho